Messier 81 - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 09h 55m 33.2s, +69° 03′ 55″
ကြယ်စုတန်း အာရှာ မေဂျာ
ညာဘက်တိမ်းစောင်းမှု 09° 55′ 33.2″
နိမ့်ဆင်းမှု +69° 3′ 55″
ထောင့်ဖြတ် အချင်း(V) 26.9 × 14.1 moa
ပကတိအရွယ်အစား (V) 6.94
ဂလက်ဆီ အမျိုးအစား SA(s)ab, LINER
၁၁.၈ ± ၀.၄ Mly (၃.၆၂ ± ၀.၁၂ Mpc)
Messier 81 (NGC 3031 သို့မဟုတ် Bode's Galaxy) သည် အာရှာ မေဂျာ ကြယ်စုတန်းမှ အလင်းနှစ် ၁၂ မီလီယံ ကွာဝေးသော ခရုပတ်ပုံစံ ဂလက်ဆီဖြစ်ပြီး ဂလက်ဆီစာရင်း၌ ဂလက်ဆီကို ပထမဆုံး ရှာဖွေတွေ့ရှိသူ Johann Elert Bode အားအစွဲပြုကာ Bodeanus Ursae Majoris ဟုခေါ်သည်။ ကမ္ဘာမြေနှင့် နီးကပ်ကာ ယင်း၏ ဗဟိုဝတ်ဆံသည် နေထုထည်ပေါင်း ၇၀ မီလီယံရှိသောကြောင့် ဝါရင့်နက္ခတ္တပညာရှင်များက အထူးလေ့လာမှုပြုကြသည်။ ထို့အပြင် ဂလက်ဆီ၏ ကြီးမားသော အရွယ်အစားနှင့် တောက်ပမှုကြောင့် အပျော်တမ်း နက္ခတ္တပညာရှင်များအတွက်လည်း ရေပန်းစားသည့် ပစ်မှတ်ဖြစ်လေသည်။
↑ Jensen, Joseph B. (2003). "Measuring Distances and Probing the Unresolved Stellar Populations of Galaxies Using Infrared Surface Brightness Fluctuations". Astrophysical Journal 583 (2): 712–726. doi:10.1086/345430. Bibcode: 2003ApJ...583..712J.
↑ Karachentsev, I. D. (2006). "Masses of the local group and of the M81 group estimated from distortions in the local velocity field". Astrophysics (journal) 49 (1): 3–18. doi:10.1007/s10511-006-0002-6. Bibcode: 2006Ap.....49....3K.
↑ Dreyer၊ J. L. E. (1988)။ Sinnott၊ R. W. (ed.)။ The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters။ Sky Publishing Corporation / Cambridge University Press။ ISBN 0-933346-51-4။
↑ ၄.၀၀ ၄.၀၁ ၄.၀၂ ၄.၀၃ ၄.၀၄ ၄.၀၅ ၄.၀၆ ၄.၀၇ ၄.၀၈ ၄.၀၉ ၄.၁၀ NASA/IPAC Extragalactic Database။ Results for NGC 3031။ 2006-11-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ SIMBAD-M81။ SIMBAD Astronomical Database။ 2009-11-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Armando, Gil de Paz (2007). "The GALEX Ultraviolet Atlas of Nearby Galaxies". Astrophysical Journal 173 (2): 185–255. doi:10.1086/516636. Bibcode: 2007ApJS..173..185G.
↑ SIMBAD Astronomical Database။ Results for NGC 3031။ 2006-11-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jones၊ K. G. (1991)။ Messier's Nebulae and Star Clusters (2nd ed.)။ Cambridge University Press။ ISBN 0-521-37079-5။
↑ Devereux, N. (2003). "STIS Spectroscopy of the Central 10 Parsecs of M81: Evidence foraMassive Black Hole". Astronomical Journal 125 (3): 1226–1235. doi:10.1086/367595. Bibcode: 2003AJ....125.1226D.
↑ O'Meara၊ S. J. (1998)။ The Messier Objects။ Cambridge University Press။ ISBN 0-521-55332-6။
Wikimedia Commons တွင် Messier 81 နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
StarDate: M81 Fact Sheet Archived 22 July 2011 at the Wayback Machine.
SST: Messier 81 Archived 19 June 2006 at the Wayback Machine.
Spitzer Image Gallery Archived 31 August 2007 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Messier_81&oldid=716261" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။